June 2, 2021 - समृद्ध नेपाल
कमेन्टमा लेखेर भित्र गएर भिडियो हेर्नु होला !
कठै भगवान पनि उदयपुरका कोरोनाले एकै घरका दाजुभाइको चार दिनको फरकमा नि’धन !
उदयपुर : चार दिनको फरकमा उदयपुरमा कोरोना संक्रमणले एकै परिवारका दुई दाजुभाइको ज्या’न ग’एको छ। योसँगै उदयपुरमा कोरोनाबाट मृ,त्यु हुनेको संख्या ३५ पुगेको छ। रौतामाई गाउँपालिका ७ मुर्कुचीका ५० वर्षीय पुस्कल मस्राङ्गी मगर, ४५ वर्षीय तुलबहादुर मस्राङ्गी मगरको चार दिनको फरकमा ज्या’न ग’एको हो । पुस्कल परिवारका जेठो छोरा हुन् भने तुलबहादुर साइलो हुन् ।
बझाङ बझाङमा एकैदिन ४ जनाको मृ’त्यु भएको छ । तीमध्ये २ जनाको भीरबाट लडेर मृत्यु भएको हो।मृ’त्यु हुनेमा तल्कोट गाँउपालिका–१ रैसेल्लीका २० वर्षीय राजु तामाङ र जाजरकोटका ४० वर्षीय खडक पुनको रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङका निमित्त कार्यालय प्रमुख प्रहरी निरीक्षक कमलप्रशाद चौधरीले बताएका छन् । बझाङ बझाङमा एकैदिन ४ जनाको मृ’त्यु भएको छ ।
“कमेन्टमा Hello लेखेर भित्र गएर भिडियो हेर्नु होला !
कुनै पनि बुबा आमा आफ्नो सन्तानको बिवाह भन्ने बित्तिकै उत्साहित नहुने त कुरै भएन् । बुवा आमाको सपना नै हुन्छ । आफ्नो छोरीहरुलाई राम्रो लाएकको केटा संग बिवाह गरिदिने । अनि उनिहरुको विवाहमा आफ्नो गक्षले दा’ईजो दिने ।यस्तैमा आज हामी तपाईहरुलाई यस्तै बिवाहको अनि दाईजोको बारेमा जानकारी दिन गईरहेका छौं । जुन अलि अनौठो रहेको
बेलायत सरकारले ब्रिटिस गोर्खा र सिंगापुर पुलिसका भर्तीका निम्ति अनलाइनबाटै प्रारम्भिक चरणको नाम लेखाउने (रजिस्ट्रेसन) भएको छ । त्यसनिम्ति जुन २८ देखि जुलाई १६ सम्म म्याद राखेको छ । १९ वर्षदेखि २१ वर्ष उमेर ननाघेकाले मात्र भिड्न पाउने रेक्रुट इन्टेक–२०२२ को मापदण्डमा राखिएको छ । कोभिड–१९ दोस्रो लहरको महामारीका कारण भिडभाड हुन नदिन र भर्ती
सुनकोशीमा बगेका २ भाईलाई बचाउन गएका २ दाई हराए, एक जनाको शव फेला !
सुनकोशीमा भाईहरुलाई बगाएको देखेर बचाउन गएका दाईहरु सुनकोशीमा हराएका छन् । ति मध्य एक जनाको शव फेला परेको छ । काभ्रे चौरीदेउराली गाउँपालिका वडा नम्वर ८ स्थित विर्तादेउराली स्थित सुनकोशी खोलामा माछा मा र्न गएका चार दाजुभाई मध्ये भाईहरु बग्न थालेपछि दाजुहरु बचाउन गएका हुन्। दुई दाजुहरु हराएकोमा एक जनाको शव फेला परेको छ ।
अष्ट्रेलिया पुगेकी रमिला सधैका लागि अस्ताईन !
ललितपुर साना गाउँबाट अध्ययनका लागि अष्ट्रेलियाको सिड्नी आएकी रमिला मर्हजनको मृत्यु भएको छ । उनी दुई वर्षअघि अध्ययनका लागि अष्ट्रेलिया आएकी हुन् । ब्रेन ट्युमरको समस्या देखिएर त्यसको उपचारका क्रममा उनको मृत्यु भएको बताइएको छ। श्रीमान सञ्जय महर्जन पनि उनीसँगै थिए। रमिलाको दाहसंस्कार अष्ट्रेलियामै गरिएको छ। २ वर्षअघि मात्रै उनको विवाह भएको थियो। रमिला ललितपुरको
मेरा पिता नै मेरा प्रेमी थिए अरु कोहि होइन !
नीना धेरैजसो आफ्नो जीवनसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण खुलासा गरिरहन्छिन् । हालै नीना फिल्म सरदारका ग्रान्डसन मा देखिएकी छिन् जसमा उनको भूमिकाको व्यापक तारिफ भइरहेको छ । त्यसपछि त नीना एकपछि अर्को अन्तरवार्ता दिइरहेकी छिन् । यस्तै एक अन्तरवार्तामा उनले आफ्नो एक्लोपनको विषयमा एउटा ठूलो खुलासा गरेकी छिन् । नीना गुप्ताले रेडियो जकी सिद्धार्थ कन्नडलाई दिएको आफ्नो
सरकारी गाडीमा युवती लिएर स्वयम्भू डाँडामा डेटिङ जाने व्यक्तिको परिचय खुल्यो !
कोरोना भाइरसको महामारीका कारण जारी निषेधाज्ञाको समयमा पनि सरकारी गाडीमा युवती लिएर स्वयम्भू डाँडामा डेटिङ जाने व्यक्तिको परिचय खुलेको छ ।गृहमन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार गत आइतबार विहान प्रदेश नं. ३–०१–००२ झ ४९२२ नम्बरको सरकारी गाडीमा युवती लिएर स्वयम्भुमा पुगी सार्वजनिक स्थलमा अस्वभाविक गतिविधि देखाउने व्यक्त सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको नयाँ सहर आयोजनाका निर्देशक रोशन श्रेष्ठ
युवतीलाई अँ’गालो हालेर सुता’उनेलाई एक घण्टाको ८ हजार तलब….. तुरुन्तै हेर्नुहोस !
एजेन्शीसुन्दा सबैलाई च’कित पार्ने एउटा जागिर । जसले हरेकलाई सुन्दैमा पनि अ’चम्म पार्छ । दनियाँमा कस्ता कस्ता जागिरहरु हुदा रहेछन् । इच्छा हुनेले सम्पर्कको लागि यहाँ तलको लिन्क खोल्नुहोसएउटा यस्तै जागिरको अवशर अमेरिकामा आएको छ ।यो जागिर अमेरिकाकी एकजना महिलाले ल्याएकी हुन् । उनले अं’गालो मा’रेर सुता’एको एक घण्टाको करिब ८ हजार रुपैया दिन्छिन् ।